The Shawshank Redemption (1994) | MM Movie Store
မိတျဆှတေို့ Google မှာ IMDb rating အမွငျ့ဆုံးကားမြား လို့ ရိုကျရှာကွညျ့ခငျြပါသလား? Rotten tomatoes ရဲ့ အကောငျးဆုံးကားမြားလို့ ရိုကျရှာကွညျ့ခငျြပါသလား? ရုပျရှငျသမိုငျးတလြှောကျအကောငျးဆုံးကားမြား…..မသခေငျကွညျ့သငျ့သော ကားမြား….ဘာညာသာရကာ အစုံရိုကျပွီး ရှာကွညျ့လိုကျပါ။
ဒီဇာတျကားကတော့ ထိပျပိုငျးတဈနရောမှာ အမွဲပါနပေါလိမျ့မယျ။ဇာတျလမျး အကဉျြးလေးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။
လူသတျမှုနဲ့ ထောငျဒဏျ တဈသကျ ၂ ခါ ကခြံရပွီး ရှောရှနျ့ချ ထောငျထဲကို ရောကျလာတဲ့ ဘဏျစီးပှားရေးသမား အနျဒီ ဒူဖရငျး(Tim Robbins) နဲ့ တကြှနျးသမားဟောငျးကွီး ရကျဒျ(Morgan Freeman) တို့ ရဲ့ ထောငျထဲက အခကျအခဲတှနေဲ့ မိတျဆှဘေဝ၊ အနျဒီရဲ့ ငရဲလို မြှျောလငျ့ခကျြမရှိတဲ့ နရောမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဘယျလိုတညျဆောကျပွီး နထေိုငျသှားလဲ၊
လှတျမွောကျမှုကို ဘယျလိုရှာဖှသှေားလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးလေးပါပဲ။ရုပျရှငျလေးက ရိုးရှငျးပမေယျ့….ဒါရိုကျတာတိုငျး အိပျမကျမိမယျ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ အျောစကာ လြာထားမှု (၇) နရော တခွား ဆုပေါငျးမြားစှာ နဲ့ ဝဖေနျရေးသမားတှရေဲ့ ခြီးကြူးမှုပေါငျးမြားစှာနဲ့ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ခငျဗြားတို့ဆီက မကျြရညျတှေ ခြူနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ခငျဗြားတို့ ဘဝတှကေို ဘယျလိုရှငျသနျခဲ့မိပွီလဲလို့ ပွနျတှေးမိစပေါလိမျ့မယျ။ ဘဝရဲ့ အခြိနျကောငျးတှကေို ဖွုနျးတီးမိသှားပွီလားလို့ သံသယဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
တခါမှ မတှေးမိသေးတာ ဖွဈနိုငျမယျ့ လကျရှိဘဝရဲ့ လှတျလပျမှုတနျဖိုးကို တှေးမိကောငျး တှေးမိကွပါလိမျ့မယျ။ နောကျဆုံးမှတော့ ပြျောရှငျမှုလေး တဈခု ခံစားရငျး အဆုံးသတျသှားပါလိမျ့မယျလို့…..
မိတ်ဆွေတို့ Google မှာ IMDb rating အမြင့်ဆုံးကားများ လို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? Rotten tomatoes ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားများလို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? ရုပ်ရှင်သမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးကားများ…..မသေခင်ကြည့်သင့်သော ကားများ….ဘာညာသာရကာ အစုံရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိပ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အမြဲပါနေပါလိမ့်မယ်။ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။
လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ၂ ခါ ကျခံရပြီး ရှောရှန့်ခ် ထောင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဘဏ်စီးပွားရေးသမား အန်ဒီ ဒူဖရင်း(Tim Robbins) နဲ့ တကျွန်းသမားဟောင်းကြီး ရက်ဒ်(Morgan Freeman) တို့ ရဲ့ ထောင်ထဲက အခက်အခဲတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဘဝ၊ အန်ဒီရဲ့ ငရဲလို မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ပြီး နေထိုင်သွားလဲ၊
လွတ်မြောက်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေသွားလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ။ရုပ်ရှင်လေးက ရိုးရှင်းပေမယ့်….ဒါရိုက်တာတိုင်း အိပ်မက်မိမယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အော်စကာ လျာထားမှု (၇) နေရာ တခြား ဆုပေါင်းများစွာ နဲ့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေရဲ့ ချီးကျူးမှုပေါင်းများစွာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ဆီက မျက်ရည်တွေ ချူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘဝတွေကို ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့မိပြီလဲလို့ ပြန်တွေးမိစေပါလိမ့်မယ်။ ဘဝရဲ့ အချိန်ကောင်းတွေကို ဖြုန်းတီးမိသွားပြီလားလို့ သံသယဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
တခါမှ မတွေးမိသေးတာ ဖြစ်နိုင်မယ့် လက်ရှိဘဝရဲ့ လွတ်လပ်မှုတန်ဖိုးကို တွေးမိကောင်း တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှတော့ ပျော်ရွင်မှုလေး တစ်ခု ခံစားရင်း အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့…..